Cadaadiska la saarayo Soomaaliya, muxuu kaga duwan yahay midka dalalka kale? – Kalfadhi
Beesha caalamka ayaa ka digtay go’aanka muddo kordhinta loogu sameeyay dowladda Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharci muran badan dhaliyay oo muddo kordhin labo sano ah loogu sameeyay dowladda xilli ay isa soo tarayaan cadaadiiska beesha caalamka ee ku aadan arrintaas.
Waxay u muuqataa in wax saameyn ah uusan soo kordhin cadaadiska beesha caalamka.
Waxaa laga yabaa in madaxweyneyaasha dalalka kale aysan dhag jalaq u siin hadallada beesha caalamka balse Soomaaliya ayaa ka duwan dalalkaas maadama dowladda ay ku tiirsan tahay taageerada ay siiyaan beesha caalamka oo ay kamid yihiin dhaqaalaha la siiyo ciidamada Amisom ee ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa ka digtay go’aankan isl markaana ku baaqday in dib loogu laabto miiska wadahadalka si heeshiis looga gaaro khilaafka doorashada. BBC Somali ay warbixintan markii hore lagu daabacay.
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed